ANTSAKABARY : Ny minisitra Anandra Norbert no nataon’ny Praiminisitra nisolo vaika ny ankalana
Efa noesorina tamin’ny toerany iny ny minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha, Anandra Norbert, taorian’ny trangana fandoroan-trano tany Antsakabary, Befandriana Avaratra. 6 mars 2017
Voalazan’ireo mpanara-baovao fa tsy tokony ho ity minisitra ity irery no niharan’izany fa indrindra koa ny Praminisitra Mahafaly Solonandrasana. Saingy nataon’ity farany nisolo vaika ny ankalana iry voalohany.
Mena ambanin’ny mena rahateo ka tsy afa-mandà. Fantatra izao fa maro amin’ireo vehivavy mpikambana ao amin’ny Fikambanana vadina Polisy no tsy faly tamin’ny fanesorana ny minisitra. “Raha ny tokony ho izy, ilay Kaomisera nanome vaovao diso ny minisitra no mila saziana voalohany ”, hoy ny iray tamin’izy ireo. Namaky ny tatitra azony tamin’ireo iraka nataony tany an-toerana rahateo ny minisitra rehefa nihaona tamin’ny mpanao gazety. Mbola nanamafy aza ny tenany tamin’izany fa “hidina ifotony hanadihadiana ny zava-misy marina”.
Taorian’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fitondrana Hvm dia mandeha koa ny vaovao fa mafampana ny fitsoky ny rivotra eo anivon’ny Polisim-pirenena. Misy amin’ireto farany mantsy no tsy faly amin’ny fanesorana ny minisitra sy ny hitohizan’ny raharaha ka mety hahavoarohirohy ireo polisy rehetra nanao iraka tany an-toerana. Misy amin’ireo zanak’Avaratra koa no tsy faly. Fantatra fa mety hanao fanambaràna izy ireo amin’ity herinandro ity. Voalaza mantsy fa “minisitra roa avy any amin’iny tapany Avaratry ny Nosy iny no niharan’ny fanesorana tahaka izao”. Isan’ny mamy hoditra amin’ireo vadina polisy ny vadin’ny minisitra teo aloha Anandra Norbert. Mahatsiaro ho very andry niankinana ihany ry zareo amin’izao fanesorana izao.
2017-03-06 18:02:25 par JF
Marary lava izany minisitra Anandra Norbert izany. Na tamin’ny fotoana nisehoany teo anoloan’ny mpanao gazety aza hita fa tena reraka mafy ilay minisitra. Hoy izahay taloha izay "ny baolina tsy mandigny ny marary" . Minisitra tsy mieritreritra satria hita fa source iray ihany no niavian’ny fanambarana nataony dia ny police tany antoerana. Antsakabary tanana nilamina hatr’izay fa rehefa tonga ny police izay tsy tompon’andraikitra akory dia may ny tanana. Esory miaraka amin’i Rajao mihitsy satria tsy mahomby miaraka ireo fa dia mamositra alika lava ao !